रेडियो निङ्गलाशैनी - विकिपिडिया
सञ्चार अाधुनिक पुस्ताका लागि
अनिरूद्र मिडिया प्रा. लि
२ प्रसारण क्षमता र फ्रिक्वेन्सी
रेडियो निङ्गलाशैनी एक समाचारमुलक, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनात्मक नेपाली एफ एम स्टेसन हो । रेडियो निङ्गलाशैनी सञ्चार अाधुनिक पुस्ताका लागि भन्ने नाराका साथ २०७० साल असारमा स्थापना भएको हो । दैनिक १८ घण्टा प्रसारण हुदै आएको यो एफएमले नेपाली भाषाका साथै डोटेली भाषामा समाचारहरू र कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दछ । यस एफ एम स्टेसनको मुख्यालय बैतडीको गुरुखोला गा.वि.स. मिलनचौकमा रहेको छ ।
प्रसारण क्षमता र फ्रिक्वेन्सी[सम्पादन गर्ने]
यस एफ एम स्टेसनको प्रसारण क्षमता ५०० वाट र फ्रिक्वेन्सी ९४ मेगाहर्ज रहेको छ ।
यसले मनोरञ्जनात्मक, शिक्षामुलक, समाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य तथा सूचनामूलक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ ।
मिलनचौक, गुरुखोला, बैतडी, नेपाल
टेलिफोन नं :+९७७ ९८५८७५१०९४
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=रेडियो_निङ्गलाशैनी&oldid=655411" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:०१, ३१ जुलाई २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।